September 2017 – Wargeyska Waxgarad
September 29, 2017	Faallo, Saynis 0
Saddex iyo toban sano ka dib, maalintii Jimcaha ee 15’kii Sibtambar 2017, waxaa soo gabagaboobay sahankii fagaagbuldiyaha Kasiini uu ku dul wareegayey meeraha Raage (Saturn). Saynisyannadii maamulayey ayaa Fagaagbuldiyahan (space probe) u jeediyey in uu galo gibil-haweedka Raage, isaga oo ku socda xawaare ah 120,000km/saacaddii, si uu ugu gubto. Farriintii …
September 29, 2017	Aragti, Falanqayn, Mux39-Okt17, Saynis 0
Ilaahay—kor ahaaye—markii uu uunkan sameeyey waxa uu ku dhex abuuray noole aynu ka mid nahay. Markii Aadan cs la abuurayna waxaa la baray dhammaan magacyadii waxyaalihii jirey. Isaga iyo Xaawoba cs waxaa loo kala sheegay dhirtii ku hareeraysneed kuwa dheefta u leh iyo kuwa dhibta u keeni kara, iyada oo …
September 29, 2017	Kobcinta Nafta, Mux39-Okt17 0
Earl Nightingale waxa uu baadhayay iskuna taxallujiyay guusha muddo tobanaan sanno ah, si dhab ahna waa uu u gudanayay shaqadiisa. Waxqabadkiisii inta u badan haddeer waa la iska illaaway, balse haddii aad in uun meel ku aragtid, waa kuwo u qalma in waqti la gesho ee ha sii dayn. Aniga …
September 29, 2017	Adduunka, Faallo, Mux39-Okt17, Waxqabad 0
Dhammaan aadanuhu waxa uu ka siman yahay jacaylka darajo sare iyo sumcad. Qof walba waxa uu rabaa in la ammaano, la xusuusto, magaciisuna uu jiro qaruumo badan. Waxa aan dedaal badan u galnaa sidii aan maal ku tabci lahayn kaas oo aan filaynno in uu inna gaarsiin doono maqaam sare. …
September 29, 2017	Faallo, Mux39-Okt17, Warbixinno, Waxqabad 1
Markii ay meel daran gaadhay abaartii sannadkan bilowgiisa ka dillaacday qeybo badan oo ka mid ah waddankeenna, ayaa annaga oo asxaab lix ah, waxa aan go’aansannay in aan wax uun ku caawinno dadkayaga. Annaga oo ka fekeraynna habkii aan wax uga qaban lahayn dhibta taagan, ayaa waxa aan aragnay in …
Tacliinta Sare Ee Soomaaliya: Caqabadaha Iyo Xalka
September 29, 2017	Aragti, Faallo, Mux39-Okt17, Warbixinno, Waxbarasho 0
Bishii siddeedaad ee sannadkan waxa ay Madasha Haldoor qabatay kulan ujeeddadiisu ahayd hagidda tacliinta sare ee Soomaaliya, kaas oo cinwaan looga dhigay ‘Tacliinta Sare ee Soomaaliya: Caqabadaha iyo Xalka’. Waxaa lafaguray aqoonyahanno ku xeeldheer dhanka waxbarashada iyo cilmibaarista bulshada: Dr Maxamed Cali Afrax, Sahro Axmed Kooshin, iyo Saalim Siciid Saalim. …
September 29, 2017	Faallo, Mux39-Okt17, Qubane, Waxbarasho 0
Inta badan, marka wax la qorshaynayo waxaa caado laga dhigtaa in ‘bar-bilaw’ ilaa ‘bar-idlaad’ loo kala goosho. Tani waxa ay ka dhigan tahay in loo ruqaansado dhanka uu kaa xigo yoolka aad higsanaysaa. Sidani ma qaabka keli ah, uguna habboon, ee wax loo qorsheeyaa? Daraasad cusub ayaa ku andacoonaysa lidka. …
September 29, 2017	Mux39-Okt17, Qubane 0
Sawirkan (hoos) oo uu Cabdullaahi Wacays u sameeyey kaftan ahaan ayaa aad ugu dhex faafay baraha bulshada iyo bogagga Soomaalidu ku leedahay internetka, iyada oo ay dad badani u qaateen tirakoob dhab ah, ayna warar iyo faallooyin ku saleeyeen iyaga oo aan—haba yaraatee­— wax dabagal iyo hubin ah ku samayn. …